बहाना बनाउँदै रेजिडेन्ट, खुट्टा कमाउँदै एनएमए, पछि हट्दै गोदान – Health Post Nepal
२०७५ माघ ८ गते ८:१२
डा. केसीका माग पूरा गराउन चिकित्सक संघले आन्दोलन चर्काउने
कठोर सरकार र प्रतिकूल स्वास्थ्यको सामना गरिरहेका आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा खुलेर देखिन र जीवनरक्षाका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन चिकित्सकका संगठन डराएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ‘गोप्य रूपमा चलाएको’ अनशन निस्तेज पार्ने रणनीति र गतिविधिबाट चिकित्सकहरूका तीनवटै प्रमुख संगठन नेतृत्वले खुट्टा कमाएको आमचिकित्सकको आरोप छ ।
पछिल्लोपटक छाता संगठन भनिएको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ठूलो संख्यामा चिकित्सकको साथ भएर पनि आन्दोलनको प्रतिरोध हुने त्रासमा अरू साना संगठन अगाडि लागेपछि मात्रै साथ दिने रणनीतिमा देखिएको छ । संघभित्रै अधिकांश सदस्य कडा आन्दोलनको पक्षमा उभिए पनि नेकपानिकट एक पदाधिकारीको त्रासमा नेतृत्व डराएको संघका एक सदस्यले बताए । ‘हड्ताल आह्वान गरिहाल्दा पनि प्रतिरोध होला र नेतृत्व असफल होला भन्ने डर छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो अर्थमा नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’
डा. केसीले सघर्ष गरेका विषयहरु चिकित्सा शिक्षा सुधार, निःशूल्क पिजी, छात्रवृतिमा पढेका चिकित्सकको करार अवधि र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको विषयसमेत प्रत्यक्ष रुपमा चिकित्सकसँग सरोकार राख्ने र चिकित्सकका संघ/संगठनका पनि चासोका विषय हुन् । अर्कोतर्फ पेशाधर्मीताका हिसाबले पनि जोडिएका जेलिएर संगठन मौन बस्दा चिकित्सकबीचको एकतामा दीर्घकालीनरुपमा फुट आउने बुझाई चिकित्सकहरुकै छ ।
तर, पनि ती सबै भुलेर चिकित्सकहरु एक ठाउँमा उभिन नसकेसम्म डा. केसीको जीवन जोखिममै पारेर पनि सरकारमा माग पूरा नगर्ने दिशामा क्रियाशील भएको बरिष्ठ चिकित्सकहरुको बुझाई छ ।
संघ रेजिडेन्ट र अन्य चिकित्सकका संघ–संगठन अगाडि लागेपछि पछिपछि साथ दिने पक्षमा छ । डा. केसीको समर्थनमा ढिलामा पनि पाँचौँ दिनदेखि उत्र्रिने रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूसमेत यसपटक खुट्टा कमाइरहेका छन् । खासगरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र धरानका रेजिडेन्टहरू एकैठाउँमा आएर डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाउने गरेकामा यसपटक विभिन्न चरणमा बस्दा पनि सहमतिमै पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूले १४औँ दिनमा बल्ल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । १५औँ अनशनमा प्रतिकारमै उत्रिएको राष्ट्रिय चिकित्सक संघनिकट चिकित्सकहरू यसपटक पनि एनएमएको कार्यक्रम कुरेर बसेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यसपटक सरकार डा. केसीको अनशनलाई जसरी पनि दमन गर्ने तयारीमा छ । त्यही रणनीतिअनुसार ‘काउन्टर अनशनकारी’ र ‘भाडाका प्रदर्शनकारी’देखि गृह संयन्त्रसमेत पूर्ण रूपमा परिचालित भएको डा. केसीका समर्थक तथा सहयोगीहरू बताउँछन् ।
रेजिडेन्ट डक्डर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स (र्यान)का अध्यक्ष डा. शरद बरालले सोमबार कुराकानीमा कुनै कार्यक्रम तय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले भने, आइतबारदेखि नै प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि सम्भावित झडपका
कारण आफूहरू पछाडि हटेको भन्दै मंगबारदेखि कार्यक्रम गर्ने बताए ।
एनआरडिएसमेत समर्थनमा देखिन ढिला गर्नुको पछाडि सत्तापक्षीय दलको प्रभाव र दबाबले काम गरेको बुझाइ धेरै चिकित्सकको छ । अन्य अस्पतालका आवासीय चिकित्सकसमेत अधिकांश सरकारी जागिरे भएकै कारण डराइरहेका छन् ।
त्यसैगरी कतिपय अनशनमा चिकित्सक संघभन्दा अगाडि समर्थनमा उत्रिने नेकपानिकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) डा. केसीलाई समर्थन गर्नेतर्फ देखिएका छैनन् । गोदान पनि यसपटक सरकारसँग त्रास/आश राखेर समर्थन गर्न पछाडि हटेको मात्रै छैन, पूर्ण मौन छ ।कांग्रेसनिकटका चिकित्सकहरूको संस्था प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ अस्तित्वमा रहे पनि कांग्रेसको महाधिवेशन र महासमितिमा भाग लिनेबाहेकमा संघको क्रियाशीलता देखिन्न ।
१५औँ अनशनमा प्रतिकारमै उत्रिएको राष्ट्रिय चिकित्सक संघनिकट चिकित्सकहरू यसपटक पनि एनएमएको कार्यक्रम कुरेर बसेका छन् । स्रोतका अनुसार यसपटक सरकार डा. केसीको अनशनलाई जसरी पनि दमन गर्ने तयारीमा छ । त्यही रणनीतिअनुसार ‘काउन्टर अनशनकारी’ र ‘भाडाका प्रदर्शनकारी’देखि गृह संयन्त्रसमेत पूर्ण रूपमा परिचालित भएको डा. केसीका समर्थक तथा सहयोगीहरू बताउँछन् ।
गैरसरकारी चिकित्सकको समर्थन
यसैबीच गैरसरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीको माग अविलम्ब सम्बोधन गरी जीवनरक्षाका लागि जोडदार माग गरेको छ । डा. केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण एउटै विषयलाई लिएर १६ पटकसम्म अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको संघको ठहर छ ।
Tags: १६औँ अनशन, डा.गोविन्द केसी
जेष्ठ नागरिकले ‘कोभिसिल्ड’ खोपको दोस्रो मात्रा दुई साताभित्र पाउने